रमेश प्रसाइँको अपरेसनको ‘फेक न्युज’ भाइरल, कसले र किन लेख्छन् यस्ता गलत कुरा? – Cn Chautari
माघ १७, २०७८ सोमबार 217
के तपाईँले ।
पनि सामाजिक सञ्जालका चर्चित पात्र तथा हाल लालमोहर नामको टिभी कार्यक्रमका होस्ट रमेश प्रसाइँको आँखाको शल्यक्रिया सफल भएको खबर देख्नुभएको थियो? ।
हिजोदेखि यस्तो खबर फेसबुकमा भाइरल भएको छ।भाइरल खबरमा नेपालकै टप आँखा चिकित्सकहरु मिलेर रमेश प्रसाईको आँखाको शल्यक्रिया सफल पारेको, आँखा देखे लगत्तै खुशी हुँदै सबैभन्दा पहिला छोरी र ।
पत्नीलाई हेरेको, शल्यक्रिया सफल भएपछि अस्पतालमा नै बधाई दिन रवि पुगेको जस्ता विषय लेखिएका छन्।केही फेक न्युज उत्पादकहरुसँग मेरो कुरा भएको थियो। उनीहरुको नेटवर्क अहिलेका मूलधारका मिडियाको भन्दा खतरा देखियो।
लाखौँ लाख लाइक, फलोअर र मेम्बर भएका फेसबुक पेजहरु र फेसबुक ग्रुपहरु हुन्छन्। त्यसमा उनीहरुले एकअर्काका फेक न्युजहरु पोस्ट गर्छन्।लाइक र फलोअर बढाउनका लागि उनीहरु सामाजिक सञ्जालमा चर्चितहरुको ।
नाम पनि उपयोग गर्छन्। जस्तै, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही, रमेश प्रसाइँ, कृष्ण कँडेल, अपिल त्रिपाठी यस्तै यस्तै अनेक। माया, प्रेम, साहित्य आदिका नाममा खोलिएका फेक न्युज फैलाउने पेज र ग्रुपहरु पनि प्रशस्त छन्।
यिनीहरु पत्रकार नभएकाले न शुद्ध लेख्नुपर्छ भन्ने छ, न समाचार को नाममा जे पायो त्यही लेख्नु हुन्न भन्ने मतलब छ, आचार संहिता त अचार हो कि के हो, थाहा हुने कुरै भएन। जसले जसको फेक न्युज कपि गरेर हाले पनि मतलब छैन।
मात्र आवश्यक छ- क्लिक गरौँ गरौँ लाग्ने हेडलाइन कसरी बनाउने, फोटो त्यस्तो कसरी राख्ने- सही होस् कि नहोस्, केही मतलब छैन।केहीले आफ्नै नाममा खोलिएका ।
फेसबुकबाट यस्ता पेज र ग्रुपमा पोस्ट गर्छन् भने अधिकांश बाठा छन्। उनीहरुले फेक फोटो र नाम राखेर फेसबुक खोल्छन् र त्यसै बाट यस्ता फेक न्युज पोस्ट गर्छन्।
Prevएमसीसी पास गर्छौ भन्दै राजतन्त्र बिरुद्ध बोल्दा देउवालाई आफ्नै कार्यकर्ता द्वारा ढुंगा मुढा प्रहार भागाभाग हेर्नुहोस् भिडियो सहित् ।
Nextप्रचण्डले MCC पास बारे यस्तो कुरा बोल्दा जन्ता रूष्ट